फेरि अाैलोको कुरा
डा. सुमनराज ताम्राकार बुधवार, बैशाख ६, २०७४ 2766 पटक पढिएको
प्रसंगः औलो दिवस (२५ अप्रिल )
‘राम्रोको लागि औलोको अन्त्य गर' भन्ने नाराका साथ अर्को साता विभिन्न कार्यक्रम गरी विश्व औलो दिवस मनाइँदैछ । विश्वमा हाल करिब सवा २१ करोडभन्दा बढी मानिस औलोबाट प्रभावित छन् । औलोको कारण हाल बर्सेनि सवा लाखजना मानिसको मृत्यु भइरहेको वास्तविकता छ ।
कीटजन्य सरुवा रोगहरूमध्ये औलो सबैभन्दा डरलाग्दो कीटजन्य स्वास्थ्य समस्या हो । विशेषतः अफ्रिकाको सबसहारा क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी एसिया र मध्यपूर्वी क्षेत्रमा झै कतिपय दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा औलो व्याप्त छ । तर पनि सन् २००० देखि औषधियुक्त झुल वितरण गर्ने तथा घरभित्र लामखुट्टेविरुद्ध औषधि छर्किने काय गरिरहेको भए पनि विगत पाँच वर्षमा औलोको नयाँ बिरामी २१ प्रतिशतले र यसकै कारण हुने मृत्युदर २९ प्रतिशतले घटाउन सफल भएको छ ।
यसै अवधिमा गर्भवती महिलामा औलोको प्रकोप पाँच गुणाले घटाउन सम्भव भएको छ । सन् २०२० सम्ममा औलोको नयाँ बिरामी र यसै कारण हुने मृत्युदर ४० प्रतिशतले घटाउने लक्ष्य लिइएको छ । हाल औलोबाट उच्च प्रभावित राष्ट्रहरूमध्ये ३५ राष्ट्रमा सन् २०३० सम्ममा औलोलाई पूर्णतः उन्मुलन गर्ने लक्ष्य पनि छ । तर औलोको उच्च जोखिम भएका विश्वका ९१ वटा कम आयमूलक भएका राष्ट्रमै निर्धारित लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशतमात्र उपलब्धि भइरहेबाट चुनौती भने अवश्य छ ।
औलो, कालाजर, डेन्ग्यु, चिकन्गुन्यालगायतका संक्रमणहरू कतिपय ठाउँमा वर्षैभरि छन् भने गर्मी एवं वर्षात् मौसममा अन्यत्र पनि यदाकदा महामारीको रूपमा पैmलिने गरेको छ । सुरक्षित वातावरण तथा स्वच्छ खानेपानी एवं सरसफाइको लागि पर्याप्त पानी उपलब्ध नहुने ठाउँका बासिन्दाहरूमा कीटजन्य सरुवारोगहरूको प्रकोप बढी देखिने गरेको छ ।
लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्ने विभिन्न सरुवा रोगहरूमध्ये औलो पनि एक हो । स्त्री जातिको एनोफिलस लामखुट्टेको टोकाइबाट औलो रोग सर्दछ । औलो रोग गराउने कारक परजीवी चाहिँ प्लाज्मोडियम हो । यसको पनि भाइभेक्स, फाल्सिपेरम, मलेरी र ओभेल गरी चार उपजातिहरू छन् । औलो प्रभावित क्षेत्रमा फाल्सिपेरम उपजातिका प्लाज्मोडियमहरूको बाहुल्य छ भने अन्य क्षेत्रमा प्लाज्मोडियम भाइभेक्स नै प्रमुख कारक परजीवी हो ।
औलो गराउने परजीवीले संक्रमित बालबालिका र लामखुट्टेमा गरी आफ्नो जीवनचक्र पूरा गर्दछ । संक्रमित लामखुट्टेले निरोगी मानिसलाई टोकेपछि औलोका परजीवीहरू मानिसको रगतको माध्यमबाट कलेजोमा पुग्दछ ।
कलेजोको कोषिकाहरूमा यिनीहरूले आफ्नो विकासक्रमको विभिन्न चरणहरू पार गरी रातो रक्तकोषमा पुग्दछन् । त्यहाँ भाले र पोथीको रूपमा विकसित हुन्छन् । लामखुट्टेले संक्रमित मानिसलाई टोक्दा उनको रगतमा रहेका औलोको परजीवी लामखुट्टेको पेटमा पुग्दछ । त्यहाँ परिपक्व भाले र पोथी मिलन भएर लामखुट्टेको पेटको भित्तामा पुग्दछ । त्यहाँ यिनीहरू विभाजन भई शरीर भरि पैmलिन्छन् । यसै क्रममा लामखुट्टेको र्‍याल गन्थीमा आइपुग्दछ । र अन्य निरोगी मानिसलाई सार्न तयारी अवस्थामा हुन्छ । यी सबै प्रक्रियाको लागि करिब दुई साता समय लाग्दछ ।
लामखुट्टेको वृद्धि पानी जम्ने ठाउँ (ताल, तलाउ, नाली, पोखरी) मा हुने भएकोले वर्षात् मौसममा औलो महामारीको रूपमा पैmलिन्छ । नेपालको तराई, भित्री मधेस तथा पहाडी क्षेत्रको बेंसी भाग औलो प्रभावित क्षेत्र हुन् ।
औलो लाग्दा कम्पनसहित ज्वरो आउने, कलेजो तथा फियो बढ्ने, रक्तअल्पता हुने, जीउ दुख्ने, टाउको दुख्ने, जोर्नीहरू दुख्ने हुन सक्छ । प्रत्येक पटक ज्वरो आउँदा अलि भिन्नै खालको हुन्छ । सुरुमा जाडो महसुस हुने, त्यसपछि तातो (न्यानो) हुने र पछि पसिना खलखली आई ज्वरो ओर्लिन्छ । औलो गराउने परजीवीको उपजातिअनुसार ज्वरो निस्कने समयको अन्तराल पनि फरकफरक हुनसक्छ ।
औलो पत्ता लगाउन स्लाइडमा रगतको पातलो र बाक्लो तह बनाई औलो र यसको कारक परजीवीको उपजाति पनि पत्ता लगाउन सकिन्छ । रगतका साथै भिडियो एक्सरे, पिसाब पनि जाँच्न सकिन्छ । औलोको उपचारको लागि क्लोरोक्विननामक अवधि प्रभावकारी छ भने क्विनिन, मेफ्लोक्विनजस्ता औषधिहरूको पनि आवश्यकता पर्ने सक्दछ । यसका साथै ज्वरो घट्ने, औषधिको अलावा झोलिलो खानेकुरा बढी खुवाउने, खुल्ला हावामा राख्ने, पातलो लुगा लगाइदिने गर्नुपर्दछ ।
औलोबाट बच्न घर छेउछाउ सफा राख्ने, सुत्दा झुलको प्रयोग गर्ने (सम्भव भएसम्म औषधियुक्त तथा विशेषतः गर्भवती महिला र बालबालिकाको लागि), विशेषगरी तराई तथा भित्री मधेसमा साँझपख घरबाहिर बस्दा हातखुट्टा पूरै छोपिने लुगा लगाउने, घर र गोठका भित्ताका प्वाल एवं चिराहरू टालटुल गर्ने, गाईबस्तु पाल्ने भए तिनीहरूका लागि गोठ घरबाट टाढा बनाउने गर्नुपर्दछ । यसका साथै घरवरिपरि पानी जम्ने ठाउँबाट पुरिदिने, डीडीटी/मालाथियनजस्ता कीटनाशक औषधि छर्किदिने एवं औलो प्रभावित क्षेत्र जानु अगाडि क्लोरोक्विन औषधि खानु पर्दछ ।
औलो घातक कीटजन्य स्वास्थ्य समस्या हो ।
९१ राष्ट्रमा औलो फैलावट निरन्तर नै छ ।
सन् २०१० देखि २०१५ सम्मको अवधिमा औलोसम्बन्धी नयाँ केस २१ प्रतिशतले, यसकै कारण सबै उमेरसमूहको मृत्युदर २९ प्रतिशतले र पाँच वर्षमुनिको मृत्युदर ३५ प्रतिशतले कमी आएको छ ।
औलो रोगबाट प्रभावितहरूको संख्या सबसहारा अफ्रिकी क्षेत्र अप्रत्याशित तवरले बढी छ ।
सन् २०१५ मा पत्ता लागेका ९० प्रतिशत औलोका नयाँ केस र ९२ प्रतिशत औलोका कारण भएका मृत्यु सबसहारा क्षेत्रमै भएको थियो ।
औलो र गर्भवती महिला
गर्भवती महिलामा हुने औलो मुख्य जनस्वास्थ्य समस्यामध्ये एक हो । औलोका कारण गर्भवती महिलामा हुने रक्तअल्पता, यसैकारण गर्भेशिशुमा हुने रक्तअल्पता र सालमा विद्यमान परजीवीको संक्रमणले आफसेआफ गर्भपतन हुने, समयअगावै सुत्केरी हुने, नवजात शिशुको तौल निकै कम हुने, गर्भभित्रै शिशुको मृत्यु हुने, समग्रमा शिशुवस्थामा पनि रोगी हुने वा मृत्यु हुने सम्भावना हुन्छ ।
यसैकारण पनि गर्भवती महिलाले औषधियुक्त झुल प्रयोग गर्न, गर्भावस्थामा तारन्तार आवश्यकताअनुसार औलोविरुद्धका कतिपय औषधि सेवन गर्ने, साबिक झै आइरन र फोलिक एसिडका चक्कीहरू सेवन गर्न, औलो लागेको शंका लाग्नेबित्तिकै तुरुन्त उपचार गर्न र औलोका रोकथाम सबै उपायहरू अपनाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनले सुझाएको छ । नेपालमा पनि कतिपय औलो प्रभावित जिल्लाहरूमा नेपाल सरकारले विशेषतः गर्भवती महिलालाई औषधियुक्त वितरण गरिँदै आएको छ ।
शनिवार, असोज २८, २०७४ पानी कति पिउने ?
शनिवार, असोज २८, २०७४ मुख्य दलको किचलोले चिकित्सा विधेयक संसदमा अड्कियो
शुक्रवार, असोज २७, २०७४ रेडियसन गर्नुपर्ने क्यान्सर बिरामीको चाप बढ्यो
को बन्ला मुख्यसचिव ? 4533
मन्त्रीको डेरामै करोड खर्च 1864
यसरी छानौं तिहारमा शुद्ध खानेकुरा 439
जहाँ वर्षैभरि पुजिन्छन् कुकुर 3488
जागिरका लागि भाैतारिँदै सहिदपत्‍नी 369
समयमा काम नहुँदा सेवाग्राही हैरान 222
सालोको कुटाइबाट भिनाजुको ज्यान गयो 238
मुद्दा सुनुवाइ साढे नौ बजेदेखि नै 774
निगालो काट्ने क्रममा लडेर एकको मृत्यु 439
जबरजस्ती करणीको अभियोगमा पक्राउ 1062
टेलिकमले कात्तिकभर नि:शुल्‍क यूसिम बाड्‍ने 24131